नुवाकोटमा दलित महिला सदस्यका दुई पद खाली – इन्सेक
नुवाकोट ०७९ वैशाख १३ गते
नुवाकोटको दुई ओटा स्थानीय तहमा एक/एक ओटा दलित महिला सदस्य पद खाली हुने भएको छ । वैशाख ११ र १२ गते तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने क्रममा दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नं. १ र तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ६ मा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नै नपरेको कारण यी दुई तहमा दलित महिला सदस्य खाली हुने भएको हो ।
दुप्चेश्वर गाउँपालिका निर्वाचन अधिकृत केशरबहादुर पण्डितका अनुसार विभिन्न दलले उम्मेदवारी दर्ता गराए पनि दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा दलित महिला पदमा भने कसैको उम्मेदवारी दर्ता भएन ।
दुवै वडामा दलितको घर बस्ती नै नभएको कारण कुनै पनि दलले दलित महिला सदस्यको लागि उम्मेदवार पाउन नसकेको कारण खाली हुन पुगेको हो ।
नुवाकोटका १२ ओटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख र ८८ वडाका अध्यक्ष र सदस्य गरी ४ सय ६४ पदको लागि २ हजार २४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
स्थानीय तह प्रमुखमा ९० जना, उपप्रमुखमा ७० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । वडाअध्यक्षमा ४ सय ७० जना, महिला सदस्य ३ सय ६७ जना, दलित महिला सदस्य ३ सय ८ जना र खुल्ला सदस्य ७ सय १९ जनाले उम्मदेवारी दर्ता गराएका हुन् ।